Bit By Bit - Mass ngokubambisana - 5.5.2 Thola heterogeneity
Uma yashukumisa inqwaba yabantu ukuba basebenze inkinga yangempela zesayensi, wena uzothola ukuthi ababambiqhaza yakho kuyoba heterogeneous ngezindlela ezimbili eziyinhloko: bayohlala ziyehluka ngamakhono abo futhi bayohlala ziyehluka nezinga labo umzamo. Ukusabela wokuqala we Abacwaningi abaningi yezenhlalo ngakususi ukhwaliti ongaphakeme ababambiqhaza base bezama ukuqoqa inani elimisiwe ulwazi kwabanye abantu kwesokunxele. Lena indlela engafanele ukwakha iphrojekthi mass ngokubambisana.
Okokuqala, asikho isizathu ukuba ngakususi abahlanganyeli ongaphakeme abanamakhono. Ngo izingcingo evulekile, ababambiqhaza ongaphakeme abanamakhono kungabalimazi izinkinga; iminikelo yabo musa muntu futhi akudingeki isikhathi sokuhlaziya. In kathisha womuntu futhi basakaza iqoqo idatha imiklamo, ngakolunye uhlangothi, indlela engcono kakhulu ukulawula izinga yimihlangano komsebenzi, hhayi bar eliphezulu for iqhaza. Empeleni, kunokuba kungabalwa ongaphakeme ikhono ababambiqhaza, indlela engcono ukubasiza ukwenza iminikelo kangcono, njengoba nje abacwaningi eBird oyenzile.
Okwesibili, akukho sizathu ukuqoqa inani elimisiwe ulwazi ngamunye owayekhona. Ukuhlanganyela eziningi mass ngokubambisana amaphrojekthi Liyindawo ukungalingani (Sauermann and Franzoni 2015) nedlanzana labantu sandla eziningi-ngezinye izikhathi esibizwa ngokuthi inhloko lamahwahwa -futhi okuningi abantu sandla kancane-ngezinye izikhathi kuthiwa umsila omude. Uma ungenalo ukuqoqa ulwazi kusuka ekhanda amanoni nomsila eside, usuke kusale amathani kolwazi uncollected. Ngokwesibonelo, uma Wikipedia wasamukela 10 no-10 kuphela edits umhleli ngayinye, it sasiyolahlekelwa mayelana 95% ukuhlelwa (Salganik and Levy 2015) . Ngakho, ne mass ukubambisana amaphrojekthi, kungcono ukuba asizakale heterogeneity kunokuba ukuzama ukuqeda it.